चितवनमा भेटिए- ७१ बर्षका अचम्मका गायक हजुरबुवा ! यो उमेरमा सबैलाई चकित पार्ने गीत गाए (भिडियो हेर्नुस) – दैनिक नेपाल न्युज
चितवनमा भेटिए- ७१ बर्षका अचम्मका गायक हजुरबुवा ! यो उमेरमा सबैलाई चकित पार्ने गीत गाए (भिडियो हेर्नुस)
युटुब मिडियामा अनौठा कुराहरु चर्चामा आई हाल्छन् । नयाँ र रोचक कुरा देखाउन सधैं तत्पर रहन्छन्, केहि युटुब प्रस्तोताहरु । यसमै एक नाम हो, शिशिर भण्डारीको । शिशिर पछिल्लो समय युटुब मार्फत समाजसेवा पनि गरिरहेका छन् । उनको युटुब च्यानल नयाँ नयाँ न्युज नेपालबाट धेरैको जीवन परिवर्तन भएको छ । यसैबिच उनले चितवनमा ७१ बर्षका गायक हजुरबुवालाई भेटेका छन् ।
श्री लाल भारतीले यो उमेरमा गीत रकेर्ड गराईसकेका छन् । जवानी देखिनै गाउने भारतीले छोरीका कारण गीत रेकर्ड गराए र भिडियो निर्माण पनि गरे । उनले सालीको बारेमा गाएको रमाईलो गीत गज्जबको छ । भारतीले गीत गाएरै श्रीमतीलाई मोहनी लगाएर बिहे गरेको बताए । भिडियो हेर्नुस…
अगेनामा परेका पाँच महिने शिशुको उद्धार
रुपन्देहीमा मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न सात जनालाई पक्राउ